Ku qaado Macbook-gaaga ama Macbook Pro shandaddan casriga ah | Waxaan ka socdaa mac
Ku qaado Macbook-gaaga ama Macbook Pro shandaddan casriga ah
Apple waxay isku dayeysay sanado inay hesho laptop-ka ugu fudud uguna cidhiidhsan. Kuwa naga mid ah ee adeegsada Mac-geena marka aan u socono shaqada ama safarka waxaan si aada ugu mahadnaqaa fudeydkan iyo ergonomiska. Xullo kiiskan boorso ama shandad loogu talagalay gaadiidka, adigoon noqon hawl culus, haddii ay u baahan tahay wakhti go'an. Hagaag, naqshadeynta ugu yar ee kumbuyuutarrada Apple waxay u baahan tahay in si ammaan ah loogu raro, laakiin isla markaa xarrago leh. Maanta waxaan ognahay shandad buuxisa labadan sifo oo hore loo kashifey, taas oo isla markaa ku jirta qiime la awoodi karo oo ficil ahaan u ah dhammaan dadka isticmaala Mac.
Dibedda, shandadani waxay leedahay dhammayn u eg dhar, dhinaca kale, taabashada waa maro wanaagsan sida dharka, laakiin leh Dareenka polyester, ku habboon waxyaabaha biyuhu xireen, sida hoos looga hadlay. Waxay ku jirtaa midabada soo socda: cawl khafiif ah, oo leh zip iyo xamil liin leh, ama cagaar cagaaran iyo siib madow oo ku qabta xamil liinta. Waxaan haynaa jeeb dibadeed, oo ku habboon kaydinta xeedho, mobilada ama walxaha kale ee yaryar.
Qodob kale oo cajiib ah ayaa ah jaakad biyuhu xiraan kaas oo keena boorsada Inateck. Waxay ku dhex jirtaa ilaalinta 600D, oo u adkaysata buufin biyo ah iyo naqshadeeyayaashu waxay xaqiijinayaan inay socon karto sannado.
Faa'iidada kale ee shandadda, ka saarista Mac-da, markan, naqshadeynta ayaa u oggolaaneysa qalabka in laga saaro dhinaca.
Ugu dambeyntiina, dhinaca ugu muhiimsan feker ahaanteyda, ka-ilaalinta dharbaaxooyin aan ula kac ahayn. Waxay leedahay 5 suuf gudaha ah oo u oggolaanaya difaac weyn.
Shandada waxaa lagu heli karaa cabirrada soo socda: 13 ilaa 13.3 inji, 14 inji iyo 15 ilaa 15.4 garaacis. Waxaan ka iibsan karnaa shandada cinwaanka Amazon, iyo qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa € 13,99 ilaa € 19,99 Iyadoo kuxiran cabirka la doortay. Waqtiga aan qorayo maqaalka, xagga hoose, waxaan ka heli karnaa qiimo dhimis 30% ah adoo galaya lambarka halkaas ka muuqda.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad kiiskaaga u dhiibto beddel muuqaal ama aad si fudud u ilaaliso qalabkaaga, tani waa fursad aad u fiican.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Ku qaado Macbook-gaaga ama Macbook Pro shandaddan casriga ah
Si buuxda ugu cusbooneysii MacBook-gaaga mophie USB-C batteriga budada
Wells Fargo wuxuu ku darayaa inka badan 5.000 ATM-yada lacag la bixista adoo adeegsanaya Apple Pay